Shiinaha Mashiinka Maya: Soosaarka Shiinaha ee Soosaarida otomaatiga ah SPJ taxanaha birta mashiinka mashiinka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Midow Sare
Mashiinka mashiinka wax lagu kala jaro waa mashiin badan oo kala duwan, oo qaabab badan loo adeegsan karo, adeegsiga naqshadeynta qaabdhismeedka qaabaysan, isdhaafsiga qeybaha waa wanaagsan yahay, mindi caawiyaha ah si loo korsado dhinta been abuurka. Ujeedada ugu weyn ee mashiinka wax shiidaya ayaa ah inuu xiirto oo uu soo saaro walxaha biraha waaweyn leh iyo walxaha balaastiga balaastigga weyn ee aan ku habooneyn gaadiidka, kuna kala jaro waxyaabaha xaashida loo baahan yahay si loo kordhiyo cufnaanta isku ururinta ee gaadiidka fudud iyo dib u warshadeynta. Muuqaal qurux badan, qaab dhismeed xarrago leh, sax ah oo is haysta. Muuqaalka mashiinka birta xoqan ee waaweyn ma aha oo kaliya inuu hagaajiyo awoodda wax soo saarka iyo burburka waxtarka, laakiin wuxuu kaloo ballaariyaa baaxadda dalabka.
Mashiinka mashiinka birta ayaa badanaa loo isticmaalaa burburka biraha duugga ah, wuxuu kordhiyaa cufnaantiisa badan si loo fududeeyo gaadiidka, dib u warshadaynta Mashiinka mashiinka birta ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa xoqidda baaldiga rinjiga, baaldiga naaftada, xaashida birta khafiifka ah, qolofka gawaarida, birta riixaya birta, qashinka birta ah iyo qalabka kale ee birta ah. Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ayaa laga sameeyaa bir bir ah oo aad u sarreeya, oo leh iska caabin xoog leh iyo xoog sare ...
●Mindida dhaqaaqa ee adag, waxtarka sare ee burburka, aaladaha waxaa laga sameeyaa dahaarka birta birta ah, nolol adag iyo adeeg dheer.
Thickness Dhumucda saxanka Frame, wuxuu iska caabin karaa tiknoolajiyada sare, oo aad u xoog badan.
Microcomputer (PLC) xakamaynta otomaatiga ah, dejinta bilowga, joojinta, dib u celinta iyo culeyska howlaha kontoroolka tooska ah ee otomaatiga ah.
Machine Mashiinkayaga mashiinka wax lagu kala jaro wuxuu leeyahay astaamaha xawaaraha hooseeya, Xuddunta weyn, buuqa yar, boodhku wuxuu gaari karaa heerka ilaalinta deegaanka.
● Si fudud loo hagaajiyo, kharashka dayactirka oo hooseeya, mid dhaqaale oo waara.
Dhumucda aaladda iyo tirada ciddiyaha mindi waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo waxyaabo kala duwan
Mabaadi'da shaqada ee mashiinka mashiinka birta:
Waxyaabaha loo marayo nidaamka quudinta ee mashiinka xoqan ee ku jira sanduuqa, sanduuqa mashiinka mashiinka birta oo leh daab xoqan, qalab ka dib jeexitaanka daabka, xoqida, xiirashada iyo ficil kale oo dhammaystiran, oo loo jajabiyey qaybo yaryar oo qalab ah si loo buuxiyo shuruudaha, ka hooseeya qayb sanduuqa ka mid ah. Soo bixitaanka mashiinka mashiinka wax xardha ma aha oo kaliya inuu xaliyo aaga balaaran ee alaabada lagu xareeyo iyada oo la adeegsanayo mashiinka birta wax lagu burburiyo sidoo kale way fududahay in la qaado oo dib loo warshadeeyo. In geeddi-socodka oo dhan, ugu muhiimsan waa madaxa magaabay iyo mashiinka, mashiinka mashiinka birta jeexjeexa qalabka biraha, madax adayga madaxa jarjarka, xirashada shuruudaha iska caabinta ayaa si gaar ah aad u sarreeya, haddii aan loo baahnayn shuruudaha ayaa horseedi doona dhaawaca mashiinka xoqidda birta.
Mashiinkayaga mashiinka kala jajaban wuxuu leeyahay kontorool otomaatig ah, wuu ku habboon yahay hawlgalka, dayactirka fudud.
1.Metal Shredder daab daab
Waxaan kuu habeyn karnaa qalabka mashiinka mashiinka birta ah ee ku saabsan alaabta ceyriinka ah ee mashiinka mashiinka birta ah.
3. Mashiinka oo dhan
Mashiinkayaga yar-dhan ee hal bir shiide ah wuxuu leeyahay naqshad gaar ah, wuxuu daboolayaa aag yar, wuxuu leeyahay Astaamaha Badbaadada iyo Habboonaanta.
Model Dhexroor daab (mm) Cabbirka qolka (mm) awood (kg / h) Awood (kw) Cabbirka mashiinka (mm) Miisaanka (kg)
Mashiinkeena SPJ Qalabka Mashiinka Mashiinka wuxuu bixiyaa qaybo caan ah oo caan ah, waxaan la shaqeynay shirkado badan oo caan ah oo caan ah, sida SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI iyo wixii la mid ah in ka badan 10 sano
Waxaan u isticmaali doonaa baakadaha filimka lagu duubay ama baakadaha alwaaxda ah si aan u ilaalino mashiinkeena SPJ Taxanaha birta, waxaan u samayn doonaa difaac wanaagsan mashiinkeena SPJ Taxanaha birta ka hor inta aan la soo saarin weelka.
U fiirso Mashiinka Mashiinka Mashiinka Qashinka ah ee Ficilka ah!
Hore: Model No: CBJ Taxanaha Haydarooliga qashinka baal jabiyaha
Xiga: Qaab No: Maareynta Buugga Soosaarida Shiinaha Q43 Taxanaha Qalabka Mashiinka Qalabka Birta ah
mashiinka kala jeexjeexa
Mashiinka Birta Briquette, Baler Xadhig Baler, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah, Sheet Birta Baler, Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger,